सरकारले आयातमा रोक लगाएका १० वस्तु नेपालमा कति भित्रन्छ? « Dainik Online
सरकारले आयातमा रोक लगाएका १० वस्तु नेपालमा कति भित्रन्छ?
प्रकाशित मिति : १४ बैशाख २०७९, बुधबार ४ : ११
काठमाडौं । राज्यको ढुकुटीमा रहेको संचित रकम घट्दै गएपछि सरकारले बुधबारबाट लागु हुनेगरी १० वटा वस्तुको आयातमा रोक लगाएको छ।
सरकारले रोक लगाएका वस्तुमा कुरकुरे, कुरमुरे, लेज र यस्तै उत्पादनहरु, सबै प्रकारका तयारी मदिरा, चुरोट तथा सुर्तीजन्य बस्तु (कच्चा पदार्थ ल्याउन छुट), हिरा (औद्योगिक कच्चा पदार्थ ल्याउन छुट), मोबाइल सेट, रंगीन टेलिभिजन (३२ इञ्चभन्दा माथिका(, जिप, कार र भ्यानहरु, २५० सीसी भन्दा माथिल्लो क्षमताका मोटरसाइकल, सबै प्रकारका खेलौनाहरु र तास रहेका छन्।
सरकारले रोक लगाएका वस्तुहरु चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को पहिलो नौ महिनामा विभिन्न देशबाट नेपालमा ५२ अर्ब ४४ करोड ९० लाख ७२ हजार रुपैयाँको भित्रिएको भन्सार विभागको तथ्याङ्कले देखाउँछ।
पछिल्लो नौ महिनामा ५८ करोड ७६ लाख १५ हजार रुपैयाँको १२ लाख ९३ हजार ५६ केजी कुरकुरे, कुरमुरे, लेज र चिजबल्स नेपाल भित्रिएको थियो ।
२०७८ साउनदेखि चैत मसान्त सम्मको अवधिमा सबै प्रकारका तयारी मदिरा २ अर्ब ७० करोड २९ लाख ५० हजार रुपैयाँको नेपालले आयात गरेको छ। उक्त मूल्यमा ५१ लाख ७३ हजार ५४१ लिटर मदिरा नेपाल भित्रिएको विभागले जनाएको छ।
यस्तै, बितेको नौ महिनामा ५५ करोड ४६ लाख ६२ हजार रुपैयाँको चुरोट तथा सुर्तीजन्य बस्तु नेपालले आयात गरेको थियो। सोही अवधिमा नेपालले २ अर्ब ४७ करोड २६ लाख ५७ हजार रुपैयाँको हिरा आयात गरेको विभागले जनाएको छ।
चालु आर्थिक वर्षको पहिलो नौ महिनामा ३४ अर्ब ९७ करोड ९७ लाख ८९ हजार रुपैयाँको मोबाइल सेट नेपाल भित्रिएको देखिन्छ। उक्त अवधिमा नै ३ अर्ब ५० करोड २९ लाख ३८ हजार रुपैयाँको ८ लाख ४३ हजार ९३५ थान टेलिभिनज सेट नेपालले आयात गरेको थियो।
नेपालले सोही समयमा विभिन्न देशबाट ५ अर्ब ५७ करोड २ लाख ८१ हजार रुपैयाँको जीप, कार र भ्यानहरु आयात गरेको विभागको तथ्याङ्कले देखाउँछ।
बितेका नौ महिनामा १ अर्ब १६ करोड ४९ लाख २३ हजार रुपैयाँको २५० सीसी भन्दा माथि क्षमता भएका मोटरसाइकल नेपाल भित्रिएका छन्। सोही अवधिमा ७१ करोड ७७ लाख ४७ हजार रुपैयाँको विभिन्न प्रकारका खेलौनाहरु नेपालले आयात गरेको थियो।
विभागका अनुसार पछिल्लो नौ महिना विभिन्न देशबाट नेपालमा १९ करोड ५५ लाख १० हजार रुपैयाँको खेल्ने तास भित्रिएको थियो।